Alvaro Morata oo ka hadlay farqiga u dhexeeya Premier League iyo Horyaaladii uu ka soo Cayaaray? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Alvaro Morata oo ka hadlay farqiga u dhexeeya Premier League iyo Horyaaladii uu ka soo Cayaaray?
(16-9-2017) Weeraryahanka dalka Spain ee dhawaan ku soo biirey kooxda Chelsea Alvaro Morata ayaa is bar bar dhig ku sameeyey Premier League iyo Horyaalada Spain iyo Talyaaniga oo uu horay uga soo Cayaaray.
Alavaro Morata ayaa ku kaftamay kulamdii aan Cayaaray Horyaalka Premier League dalka England Goolashii aan dhaliyey dhamaantood Madax ayey ahaayeen sikalana Gool laguma dhalin karo waayo halkaan Farsamo mataal ee Waxaa yaala dagaal iyo kubado Tuuryo ah balse mardhow Lug waan ku dhalin doonaan Goolal.
Cayaaryahanka Chelsea oo 2 Xili Cayaareed ku soo qaatay Horyaalka dalka Talyaaniga ayaa sheegay in Horyaalkii ugu adkaa ee uu abid ka Cayaaro uu ahaa kan Talyaaniga isaga oo ku micneeyey in uu yahay mid dhibadan ayna joogaan daafacyo qiyaano badan oo bartay oo kaliya sida Weeraryahanada loo dhibaateeyo waxaana lays baraa ayuu yiri qiyaano oo kaliya.
Morata ayaa sidoo kale sheegay in Horyaalka dalka Spain uu yahay mid inta badan Cayaartoyda labaro Farsamo iyo kubad dhulka lagu dheelo balse Premier League uu yahay mid u baahan fiisikaal iyo orod laakiin aan lahayn farsamo fiican oo Goolal lagu dhaliyo.